Ny Sinopulse Hose Factory dia manana traikefa 15 taona amin'ny famokarana sy fanondranana ny hose hydraulic, hose indostrialy ary fitaovana, dia nandalo fanamarinana ISO 9 0 0 1 SY MSHA.Ny Brand Sinopulse dia amidy amin'ny firenena maro eran-tany.
Ny atrikasa iray manontolo dia mandrakotra mihoatra ny 20.000 metatra toradroa, ahitana atrikasa fampifangaroana fingotra, atrikasa mandrill malefaka, atrikasa mandrill mafy, atrikasa tsy mandrill, trano birao.
Mba hitazonana ny kalitao sy ny fahombiazany, dia mifantoka amin'ny fitaovana, ny fitantanana ary ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao, avy amin'ny akora, mandeha amin'ny trano fanatobiana entana vita, Ny dingana rehetra dia samy manara-maso.
Ny laboratoara akora manta dia manao fitiliana ny hamafin'ny moron-dranomasin'ny fingotra, ny fihenjanana tariby vy, ny adhesiveness eo amin'ny fingotra sy ny tariby vy, ny curve vulcanization fingotra.
Horaisina tsara ao amin'ny SINOPULSE ianao